May 2018 – Nepacha
मुख्यमन्त्री राउतलाई अमेरिका भ्रमणमा रोक लगाउनु गम्भीर गल्तीः डा. भट्टराई
तारा र अरुणा प्रिक्वाटरफाइनलमा
स्थानीय तहमा पनि गौरवका आयोजना
सी जीनपिङ विश्वकै शक्तिशाली
मुख्यमन्त्री राउतलाई अमेरिका भ्रमणमा रोक लगाउनु गम्भीर गल्तीः डा. भट्टराई अनलाइनखबर 1 प्रतिक्रिया 389 SHARES Facebook Twitter Email ८ जेठ, काठमाडौं । नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले प्रदेश २ का मुख्यमन्त्रीको अमेरिका भ्रमणलाई रोक लगाउन नहुने बताएका छन् । उनले संघीय सरकारको निर्णय सच्याउनुपर्ने बताएका छन् । आइतबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेश
सुनसरी — सातौं पुष्पलाल स्मृति राष्ट्रिय ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता इटहरीस्थित नवनिर्मित ब्याडमिन्टन कभर्डहलमा बुधबार सुरु भएको छ । पहिलो दिन महिला एकलमा जेस्ट ब्याडमिन्टन एकेडेमीकी तारा आले र धनकुटाकी अरुणा तामाङ प्रिक्वाटरमा पुगेका छन् । ताराले धनकुटाकी गीता राईलाई २१–१५, २१–१४ र अरुणाले झापाकी अञ्जना राईलाई २१–१२, २१–१७ ले हराए । यू–१९ तर्फ कञ्चनपुरका सौरभ चन्द, मोरङका जोन जसराज,
गोरखा — सिरानचोक गाउँपालिका-६ गाखुँ स्थीत संसारी महेन्द्र मावि नयासाघुँमा बुधबार दोस्रो पिरियडको कक्षा चल्दै थियो । कक्षा ७ का सौकात मियाँ एक्कासी विरामी परे । कक्षाकोठा मै वान्ता गरे । गर्मी बढेसँगै भूकम्प पछि बनेको अस्थायी कक्षाकोठाको जस्ता तातेर यहाँ दैनिकजसो विद्यार्थी विरामी पर्न थालेका छन् । शिक्षकहरुका अनुसार पहिलो पिरियडदेखि नै गर्मीले कक्षाकोठामा बसिनसक्नु हुन्छ। ‘हाजिर गर्न सक्ने
काठमाडौँ — सांसदहरूले चालु आर्थिक वर्षभित्र खर्चने गरी ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ शीर्षकको ५० लाख र ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम’ शीर्षकको ३ करोड रुपैयाँ बजेट तत्काल निकासा गराउन सरकारमाथि दबाब बढाएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ सकिन दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा सांसदहरूले यही अवधिभित्र खर्च गर्न उक्त रकम निकासा खोजेका हुन् । संघीय संसद्मा बुधबार
राष्ट्रियस्तरमा मात्रै चर्चा सुनिएका गौरब आयोजनाको सन्दर्भ अब स्थानीय तहमा पनि उत्तिकै गुन्जिने भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गाउँपालिका-नगरपालिकाले गौरबका आयोजनाहरू बनाउन सक्ने उल्लेख गरेकोले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को बजेट तथा कार्यक्रममा ७ सय ५३ स्थानीय तहले गौरबका आयोजनाहरू घोषणा गर्ने भएका छन् । गाउँपालिका-नगरपालिकाले बजेट सीमा निर्धारणको प्राथमिकताको पहिलो
न्यूयोर्क– विश्व प्रख्यात अमेरिकी पत्रिका फोब्र्स यो वर्षको विश्वकै शक्तिशाली मानिसको सूची सार्वजनिक गरेको छ । सूचीको पहिलो स्थानमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जीनपिङ परेका छन् । रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई दोस्रो स्थानमा धकेल्दै उनी विश्वकै शक्तिशाली व्यक्ति भएकमा हुन् । मोदीको नोटबन्दीको निर्णयलाइ भष्टाचार निर्मुल पार्ने कदमको रुपमा हेर्दै उनलाई विश्वकै नवौ शक्तिशाली व्यक्तिको रुपमा फोब्र्सले